သင့်အတွက် မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံအပေါ် အမြင်ဆန်းများပေးနိုင်မည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ သတို့သမီးဝတ်စုံပုံစံ 20 ပုံ - ONE DAILY MEDIA
အဖြူရောင်မင်္ဂလာဝတ်စုံ၊ မျက်နှာလွှားဇာပဝါနှင့် သတို့သမီးပန်းစည်း တို့ဟာ ယနေ့ခေတ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နေရာတိုင်းလိုလိုမှမင်္ဂလာပွဲ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း အဖြူရောင် ၀တ်စုံထက် ရိုးရာ ဝတ်စုံ မင်္ဂလာပွဲကို ရွေးချယ်တဲ့ စုံတွဲတချို့ ရှိကြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ရင်သပ်ရှူမောစေမည့် ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီးမှ ထူးခြားသော ရိုးရာမင်္ဂလာဝတ်စုံများကို စုစည်းထားပါတယ်
1. ရိုးရာရွှေငွေ လက်ဝတ်ရတနာများစွာဖြင့် ရွှေရောင် ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်လေ့ရှိသော ယီမင်သတို့သမီး
2. ဂျပန်သတို့သမီးများဟာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းသော ကီမိုနိုကို ၀တ်ဆင်လေ့ရှိပြီး ဖြူစင်သန့်ရှင်းမှုနှင့် ပျိုမေများကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်
A post shared by Beautiful Japanese Wedding (@beautifuljapanesewedding)
3. Kinnauri (ကက်ရှ်မီးယားဒေသမှ) သတို့သမီးများ ဟာ ငွေကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာလွှာဇာ၊ လည်ဆွဲကြီးများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူသေတ္တာငယ်များ သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်
A post shared by PHAYUL KINNAUR™️ (@phayul_kinnaur)
A post shared by Neena Hardman (@neenahardman)
4. ကာဇက်စတန်တွင် သတို့သမီးတို့အတွက် တရားဝင်အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ဘဝသစ်တစ်ခု၏အစပြုခြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်သည့် saukele ဟုခေါ်သော မင်္ဂလာဦးခေါင်းစွပ်ရှိပါတယ်
5. မွန်ဂိုသတို့သမီးများသည် အာရှအလယ်ပိုင်းရှိ မွန်ဂိုတို့၏ရာစုနှစ်များစွာကြာဝတ်ဆင်ခဲ့သော “deel” ဟုခေါ်သော ဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်
A post shared by 悟能 (@lvguoxu)
A post shared by 特日坤 (@terikun55)
6. ကင်ညာရှိ သတို့သမီးများသည် လေးလံသော ပုတီးစေ့များဖြင့် မင်္ဂလာဆောင်ကော်လာ၊ ခေါင်းစွပ်၊ လက်ကောက်များအပြင် တစ်ဦးချင်း ဟာ လည်ဆွဲ 20 ခန့် ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်
A post shared by Molly Hagan (@mollybethhagan)
7. ဂျကာတာရှိ ရိုးရာအင်ဒိုနီးရှားမင်္ဂလာဝတ်စုံတွင် ရွှေအများအပြား၊ အနုစိတ်သောပုံစံများ၊ ထင်ရှားပေါ်လွင်သောအရောင်များနှင့် တန်ဆာဆင်ထားသော ဦးခေါင်းစွပ်များပါဝင်ပါတယ်
8. တောင်အာဖရိက၏ ရိုးရာမင်္ဂလာဝတ်စုံတွင် “inkehli” ဟုခေါ်သော သတို့သမီးဦးခေါင်းအတွက် ဦးထုပ်နှင့် ရောင်စုံပုတီးစေ့လည်ဆွဲများနှင့် လက်ကောက်များ ပါဝင်ပါတယ်
၉။ တိဗက်တွင် သတို့သားက သတို့သမီးအား မင်္ဂလာဝတ်စုံနှင့် လက်ဝတ်တန်ဆာများပါဝင်သော ခေါင်းစွပ်၊ ကျစ်ဆံမြီးတွင် ချိတ်ရန် ငွေလက်ဝတ်ရတနာများနှင့် သတ္တုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ငယ်တစ်ခု ပေးပါတယ်
A post shared by KND FOTOS (@kndfotos)
A post shared by connielim (@connielimphoto)
10. Ossetia ရှိ သတို့သမီးများသည် အင်္ကျီလက်ရှည်၊ အထည်ပေါ်တွင် ပုံစံကွက်များဖြင့် ပါဝင်ပြီး ခါးတွင် သတ္တုခါးပတ်တစ်ခု ဝတ်ဆင်ကြပြီး ၎င်းကို Talisman ဟုခေါ်ပါတယ်
A post shared by Ирыстон 🌄Осетия Единая (@ossetians)
11. တောင်ကိုရီးယားတွင် သတို့သမီးများသည် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက ရိုးရာဓလေ့ကို ကိုယ်စားပြုသည့် တောက်ပသောအရောင်အသွေးနှင့် ရိုးရှင်းသော ရိုးရာဝတ်စုံဖြစ်သည့် “hanbok” ကို ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်
12. ရိုမေးနီးယားသတို့သမီးများ၏ ဆလင်ဒါပုံစံ ခေါင်းစွပ်များသည် ၎င်းတို့အား မကောင်းသော အင်အားစုများထံမှ ကာကွယ်ပေးသည်ဟု ယုံကြည်ကြပါတယ်။
A post shared by Remus Tiplea (@remustiplea)
13. Gora ဒေသ (ကိုဆိုဗိုနှင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားကြား) ရှိ သတို့သမီးများသည် ကံဆိုးခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် မျက်နှာကို ခြယ်သကြပါတယ်။
14. အိန္ဒိယသတို့သမီးများသည် ၎င်းတို့၏ဇာစ်မြစ်ဒေသကို ထင်ဟပ်စေသည့် ရောင်စုံဆာရီကို ရွေးချယ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏လက်များကို henna များဖြင့် အလှဆင်ထားပါတယ်။
A post shared by MaharaniWeddings.com (@maharaniweddings)
15. အီသီယိုးပီးယားမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံတွင် အနက်ရောင် ကတ္တီပါသရဖူများနှင့် ခရမ်းရောင်နှင့် ရွှေရောင် ၀တ်စုံများ ပါဝင်ပါတယ်။
A post shared by SiirrCapAlot (@kingofthefall_._)
16. အီရီထရီးယားရှိ သတို့သမီးများသည် ဧည့်သည်များထံမှ ၎င်းတို့၏မျက်နှာကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် ရိုးရာ သမိုင်းကြောင်းအရ ခေါင်းစွပ်ကို ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်
17. သီရိလင်္ကာတွင် သတို့သမီးတစ်ဦး၏သင်္ကေတအဖြစ် သတို့သမီး၏မိခင်က သတို့သမီးနဖူးအလယ်တွင် အထူးလက်ဝတ်ရတနာဖြစ်သည့် Nalalpata ကိုဝတ်ဆင်ပေးပါတယ်
A post shared by Dulgee Creations (@dulgee_creations)
18. တရုတ်နိုင်ငံရှိ သတို့သမီးတို့ဟာ ကံကောင်းခြင်း နှင့် ကြွယ်ဝမှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် အနီရောင် ပိုးထည် ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။
19. ယူကရိန်းသတို့သမီးဝတ်စုံတွင် အများအားဖြင့် ပန်းပွင့်ပုံစံများ ၊ တောက်ပသောအရောင်များဖြင့် ခြယ်သထားသော ၀တ်စုံများ ပါဝင်ပါတယ်။
A post shared by Ｄｖｌｏｐ　Ａｒｔ　Ｓｔｕｄｉｏ (@dvlop_art_studio)
20. ပန်းများနှင့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပန်းကုံးများအပြင် အခြားဆံပင်အဆင်တန်ဆာများသည် ပိုလန်ရိုးရာမင်္ဂလာပွဲများစွာ၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
A post shared by Синій Льон – Синий Лён (@siniylyon)
ရိုးရာမင်္ဂလာဝတ်စုံ သို့မဟုတ် အဖြူရောင်ဝတ်စုံ ဘယ်ဟာကို သင်နှစ်သက်ပါသလဲ ?? ကမ္ဘာတဝှမ်းက သင်အကြိုက်ဆုံး မင်္ဂလာဝတ်စုံတွေက ဘာများလဲ ?? သင့်အတွေးအမြင်များကို အောက်ပါမှတ်ချက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေခဲ့နိုင်ပါတယ် ။